के नुन बिनाको तरकारी खान सकिएला ? नुन नभएको अचार वा दाल खान सकिएला ?
संभवत नुनलाई अलग गरेर हामी आफ्नो नियमित खानपानको कल्पना गर्न सक्दैनौं । नुन हाम्रो खानाको अनिवार्य हिस्सा हो । तर, चिकित्सकहरु सर्तक गराउँछन्, ‘नुनको बढी प्रयोग हानिकारक हुनसक्छ । उच्च रक्तचाप जस्ता समस्यामा त यो बढी हानिकारक हुनसक्छ ।’
दक्षिण कोरियाले १ लाख ३२ हजार अपार्टमेन्ट बनाउने !